Tian’ireo Kolombiana mpanao gazety ireto ampahafantarina anao fa tsy maherifo izany Pablo Escobar izany · Global Voices teny Malagasy
Tian'ireo Kolombiana mpanao gazety ireto ampahafantarina anao fa tsy maherifo izany Pablo Escobar izany
Voadika ny 27 Marsa 2019 6:33 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Swahili, Português, Shqip, Italiano, русский, नेपाली, عربي, 日本語, English
Pikantsarin'ny toko iray amin'ny “Pablo Escobar is a Hero,” an'i La Pulla hita ao amin'ny YouTube.
Tsy nanomboka tamin'ny andian-tantara ao amin'ny Netflix ity toe-javatra ity, saingy azo heverina marimarina fa namelona indray ny toerana misy an'i Pablo Escobar ilay lehiben'ny mpanondrana rongony nandritra ny taompolo 1980 ao amin'ny kolontsaim-bahoaka ao Amerika Avaratra ny Narcos. Hatramin'ny nivoahany voalohany tamin'ny taona 2015, niteraka adihevitra momba ny endrik'i Colombia tsy mety afaka eo amin'ny sehatra iraisampirenena ho paradisan'ny cocaine anjakazakan'ny mpanondrana rongony be mpitia ity andian-tsarimihetsika mampiady hevitra ity.
Ho setrin'izany, nanao lahatsary mamaly ireo olona mbola manandratra an'i Escobar ho “maherifo” ireo Kolombiana mpanao gazety ambadiky ny fantsona YouTube La Pulla (“ilay mpanaraby” amin'ny teny espaniola), tetikasan'ny gazety kolombiana El Espectador. Ao anatin'ireo tantarainy, asongadin'ny lahatsary ireo fotoana nampihotakotaka — sy ny antontanisa — amin'ny iray amin'ireo fotoana maizina indrindra eo amin'ny tantaran'i Colombia, toy ny famonoana ny tale teo aloha Guillermo Cano tao amin'ny El Espectador tamin'ny 17 desambra 1986, sy ny fanafihana tamin'ny baomba teo akaikin'ny fasanan-dry zareo tamin'ny Septambra 1989.
Toa mahazatra ny mahita olona manao t-shirt ahitana ny sariny any amin'ny firenen-kafa, ampirisihan'ny andian-tsarimihetsika toy ny ‘Narcos’ ao amin'ny Netflix. Ary avy eo ry zareo tonga ao Colombia mandany volabe mandeha fitetezantany mba ahafahan-dry zareo mankafy ny zava-bitany. […] Io “maherifo” io no mahatonga olona an'arivony hikazakazaka ho an'ny amin'ny vola nanondranana rongony [tahaka] ny voromailala mihaza katsaka sy mahatonga ny toekarem-pirenena mankao amin'ny vilanikely hamotsiana ny vola avy amin'ny fanondranana rongony. Tsy sakaizam-bahoaka io “maherifo” io: nanao fanafihana in-623 izy, nampangirifiry sivily 1710, ary nahafaty olona 402.
Nanery anay io “maherifo” io handositra valizy nilaozan'olona eny an'arabe na amin'ny fiara iray mijanona tsy misy olona ao anatiny noho ny [fieritreretana] fa mbola mety hisy baomba ao. Nanery anay io ‘maherifo’ io hipetraka an-trano, hiahiahy ny hafa rehetra, ary hamaly amin'ny tifitra sy ny herisetra. Nanery anay hiaina ao anatin'ny tahotra mandrakariva io maherifo io.
Ny fitetezantany voatonona ao amin'ny lahatsary fantatra amin'ny hoe Narco Tours, ary tarihin-dry zareo manavatsava ny tanànan'i Medellin any amin'ireo toerana mifandraika amin'ny fiainan'i Pablo Escobar ny mpizaha tany. Niara-niasa i Global Voices sy i Radio Ambulante tamin'ny taona 2018 namariparitra ny fitetezantany tao amin'ny iray amin'ny andiany tamin'ny fandraketa-peo nahazoany loka.